महाभारतको प्रसंग : संगत गुनाको फल – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:३९
मान्छेको आनीबानी एवं स्वभाव कसरी विकास हुन्छ ? उनको लक्ष्य र उदेश्य कसरी तय हुन्छ ? उनको यात्रा र गन्तव्य कस्तो हुन्छ ? यसमा एक व्यक्ति मात्र जिम्मेवार हुँदैनन् । उनी कहाँ एवं कस्तो परिवेशमा हुर्किए, कस्ता वातावरण पाए ? कस्ता साथी–संगत बनाए ? यावत् कुराले अह्म रुपमा आउँछ ।
हामी हुर्कने परिवेश र हामीले बनाउने साथीसंगतबाट हाम्रो जीवन धेरै हदसम्म निर्देशित हुन्छन् । हामीले कस्तो लक्ष्य बनायौं ? कसरी संघर्ष ग¥यौं ? कति सफलता हासिल ग¥यौं ? यी सबैको पछाडि साथी–संगतको पनि हात हुन्छ ।